Fepetraky ny serivisy - PDF.to
Teny mankany amin'ny PDF
Ity ambany ity dia fandikan- teny tsy misy dikany amin'ny teny Anglisy momba ny serivisy sy ny politikan'ny fiainana manokana momba ny fiainana manokana momba ny lalàna mikasika ny lalàna ara-dalàna izay tsy ampiharina amin'ny teny Anglisy ihany
Amin'ny fidirana amin'ny tranonkala amin'ny https://pdf.to , dia manaiky ny hampifanaraka ireo fepetran'ny tolotrasa, ireo lalàna sy fitsipika azo ampiharina, ary manaiky fa tompon'andraikitra amin'ny fanarahan-dalàna amin'ireo lalàna eo an-toerana ianao. Raha tsy manaiky ny iray amin'ireto fehezanteny ireto ianao, dia voarara tsy ampiasaina na miditra amin'ity tranonkala ity. Ireo fitaovana voarakitra ato amin'ity tranonkala ity dia voaro amin'ny alàlan'ny zon'ny mpamorona sy ny lalàna momba ny marika.
2. Ampiasao ny lisansa
Ny fanomezan-dàlana dia omena alaina maimaim-poana ny dika mitovy amin'ny fitaovana (fampahalalana na rindrambaiko) ao amin'ny tranonkalan'ny Pdf.to amin'ny fijerena manokana momba ny fivarotana tsy miankina. Ity no fanomezana fahazoan-dàlana, fa tsy famindrana ny lohateny, ary noho io lisansa io dia mety tsy mety:
Manandrana manilika na manova ny injeniera misy rindrambaiko hita ao amin'ny tranonkalan'ny Pdf.to;
esory ny zon'ny mpamorona na ny tsipika hafa avy amin'ny fitaovana; na
Alefaso amin'ny olona hafa ny fitaovana na ny 'fitaratra' ireo fitaovana amin'ny servisy hafa.
Ity fahazoan-dàlana ity dia ho tapatapaka raha toa ianao ka manitsakitsaka ny iray amin'ireo fepetra ireo ary mety ho tapitra amin'ny Pdf.to amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tapitra ny fijerinao ireo fitaovana ireo na amin'ny famaranana ity fahazoan-dàlana ity, dia tsy maintsy mamotika fitaovana maoderina ao an-tokantranonao ianao na amin'ny format elektronika na printy.
Ny tranonkala Pdf.to amin'ny tranonkala Pdf.to dia omena amin'ny 'as is' fototra. Ny Pdf.to dia tsy manome antoka na fanehoan-kevitra na fanararaotam-pahefana, ary dia manafoana sy mandà ny fanomezan-toky hafa rehetra, anisan'izany ny tsy fisian'ny famerana, ny fiantohana ny fiantohana, ny fananana ho an'ny tanjona iray manokana, na ny tsy fanitsakitsahana ny fananana ara-tsaina na fanitsakitsahana ny zon'ny hafa.
Ankoatr'izay, Pdf.to dia tsy manome alalana na mampiseho ireo mari-pahaizana mikasika ny fahamarina, ny vokatra mety, na ny fahamendrehana amin'ny fampiasana ny fitaovana ao amin'ny tranonkalany na raha tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana toy izany na amin'ny tranonkala mifandraika amin'ity tranonkala ity.
Tsy misy na inona na inona mety hitranga amin'ny Pdf.to na ny mpamatsy azy ho an'ny fahavoazana rehetra (anisan'izany, tsy misy fetra, fahavoazana noho ny fahaverezan'ny data na ny tombombarotra, na noho ny fampiasana ny orinasa) vokatry ny fampiasana na tsy fahafahana mampiasa ny fitaovana ao amin'ny Pdf.to tranonkala, na dia nampahafantarin'ny Pdf.to na ny solontenan'ny solontenan'ny Pdf.to aza ny mombamomba ny fahavoazana toy izany. Satria ny governemanta sasantsasany dia tsy mamela ny fetran-keloka momba ny fiatrehana fiantohana, na ny fetran'ny fatiantoka ho an'ny fanimbana vokatr'izany na eo an-toeran-kafa, dia mety tsy mihatra aminao izany fetra izany.
5. Fahamarinana amin'ny fitaovana
Ireo fitaovana hita ao amin'ny tranonkalan'ny Pdf.to dia mety ahitana fotodrafitrasa ara-teknika, soratra, na sary. Pdf.to dia tsy manome antoka fa ny iray amin'ireo fitaovana ao amin'ny tranonkala dia marina, feno na ankehitriny. Ny Pdf.to dia afaka manova ny fitaovana hita ao amin'ny tranonkalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fanamarihana. Na izany aza, Pdf.to dia tsy manao fanoloran-tena hanavao ireo fitaovana.
Pdf.to dia tsy nandinika ireo tranonkala mifandraika amin'ny tranonkala ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala mifandraika amin'izany. Ny fampidirana rohy rehetra dia tsy midika ho fanamarihana amin'ny Pdf.to amin'ny tranokala. Ny fampiasana ny tranonkala mifandraika amin'izany dia amin'ny risika manokana.
Pdf.to dia afaka manavao ireo fepetran'ny serivisy ho an'ny tranokalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy filazana. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia manaiky ny hampifanaraka ny dikan-teny misy ankehitriny amin'ireo fepetran'ny tolotrasa ireo.
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia fehezin'ny lalàna ary mifanaraka amin'ny lalàn'i Connecticut ary tsy avela hiditra amin'ny raharaha tokana ho an'ny fitsarana ao amin'io Fanjakana na toerana io.
Ireo mpandray anjara amin'ny serivisy PDF.to dia mampakatra, manovaova, miditra ary mampiasa fitaovana sy serivisy amin'ny loza mety hitranga. PDF.to dia tsy manara-maso ny atin'ny mpanjifa. PDF.to dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana namboarina vokatry ny serivisy, fampahalalana, na vokatra avy amin'ny PDF.to. Ny mpandray anjara tsirairay avy dia tompon'andraikitra amin'ny fitaovana rehetra voatahiry miaraka amin'ny PDF.to, amin'ny maha-marina ny fitaovana ao anatin'izany ny antoka, ary ny fahazoana alalana ilaina amin'ny hyperlinks sy fitaovam-barotra. PDF.to tsy manome fiantohana mazava na tsy misy dikany momba ny marina, ny kalitao, na ny toetran'ny fampahalalana izay mety ho azon'ireo mpampiasa na mpandray anjara amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fampiasana serivisy PDF.to.
Azafady mba mariho ihany koa ny fampidiran'ny mpampiasa sy ny atiny dia voafafa tao anatin'ny ora maromaro taorian'ny nampakarany azy, ary ny fatin-dry zareo niova fo dia voafafa tao anatin'ny adiny efatra amby roapolo ihany koa, amin'ny lafiny iray dia fitahirizana vonjimaika ihany.
Raha mino ianao fa misy fitaovana amin'ny PDF.to manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona na tomponao, dia azonao atao ny mandefa fampandrenesana an-tsoratra momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ("Fampandrenesana") ho an'ny Agent Digital Digital Millennium Copyright ("DMCA") Agent voalaza etsy ambany . Ao amin'ny Notification dia tokony:
(A) Ampahafantaro amin'ny antsipiriany feno ny asa zon'ny mpamorona na ny fananana ara-tsaina izay lazainao fa voahitsakitsaka mba hahafahanay mahita ny fitaovana;
(B) Fantaro ny URL na ny toerana manokana ao amin'ny PDF.to izay misy ireo fitaovana izay lazainao fa manimba ny zon'ny mpamorona anao;
(C) Manome sonia elektronika na ara-batana an'ny tompon'ny zon'ny mpamorona na olona nahazo alalana hiasa amin'ny an'ny tompony;
(D) Ampidiro ny teny milaza fa mino tsara ianao fa ny fampiasana miady hevitra dia tsy eken'ny tompon'ny zon'ny mpamorona, ny maso ivoho na ny lalàna;
(E) Ampidiro ny fanambarana fa ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny fampandrenesanao dia marina ary manamarina amin'ny sazin'ny fianianana fa tompon'ny zon'ny mpamorona ianao na nahazo alalana hiasa amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona; ary,
(F) Ampidiro ny anaranao, ny adiresy mailaka, ny nomeraon-telefaona ary ny adiresy mailakao.
Azonao atao ny mandefa ny fampandrenesanao amin'ny Agent DMCA voatondro amin'ny alàlan'ny mailaka, fax na mailaka araka ny voalaza etsy ambany:
411 S. Làlana Sangamon
Fax mankany: 312-803-1667
Rehefa mahazo fampandrenesana araka ny tokony ho izy ny PDF.to dia esoriny eo no ho eo na ajanona ny fidirana amin'ireo fitaovana voalaza fa manitsakitsaka ary foanana ny kaonty mifandraika amin'izany (raha azo ampiharina) mifanaraka amin'ny DMCA.
Ny PDF.to dia nametraka politika famaranana, amin'ny toe-javatra mety sy amin'ny fahalalany azy irery ihany, ireo mpikambana izay heverina ho mpanitsakitsaka indray. Ny PDF.to dia mety ihany koa amin'ny fahaizany mandanjalanja mametra ny fidirana amin'ny PDF.to sy / na mamarana ny fampiasan'izany na iza na iza manitsakitsaka ny zon'ny fananana ara-tsaina an'ny hafa, na misy ny fandikan-dalàna miverimberina na tsia.
PDF amin'ny PowerPoint
PDF mankany amin'ny sary
PDF amin'ny XLS
PDF amin'ny XLSX
PDF mankany PPTX
PDF amin'ny OCR
PDF amin'ny TIFF
PDF amin'ny ICO
PDF amin'ny BMP
PDF amin'ny SVG
PDF amin'ny Email
PDF amin'ny ZIP
PDF mankany amin'ny WebP
PDF mankany GIF
PDF mankany PSD
DOC mankany PDF
XLS mankany PDF
XLSX mankany PDF
PPTX mankany PDF
ICO mankany PDF
BMP mankany PDF
SVG mankany PDF
Sary mankany amin'ny PDF
WebP mankany PDF
Hamafa ireo pejy PDF
Mpameno endrika PDF
253,649 fanavaozana hatramin'ny 2019!
Mifandraisa aminay - Momba ANAY - API - politika Fiarovana fiainan'olona - Fepetraky ny serivisy - Twitter
Nataon'i nadermx - © 2021 PDF.to
Nihoatra ny fetra fiovam-ponao telo isaky ny adiny ianao, azonao atao ny manova ny rakitrao ao anatiny 59:00 na misoratra anarana ary manova bebe kokoa izao.
Ny fanodinana batch dia tsy misy afa-tsy amin'ny mpampiasa Pro. Manaova fanatsarana izao hanamboarana rakitra marobe indray mandeha.
Mahazo fidirana tsy voafetra na andramo rakitra tokana